Maxaa ka Jira in Koox Ruush ahi ay ka danbeysay Weerarkii Internetka ee Qatar ee abuuray xiisada Khaliijka? – Xeernews24
Maxaa ka Jira in Koox Ruush ahi ay ka danbeysay Weerarkii Internetka ee Qatar ee abuuray xiisada Khaliijka?
Warar Horleh oo laga Helayo saraakiisha sirdoonka Maraykanka ee baadhaaya weerarkii internetka ee lagu qaaday todobaadkii Hore warbaahinta Dowlada Qatar ee lagu shaaciyey warar been ah oo sheegaya in Amiirka Qatar uu khudbad uu jeediyey ku taageeray IRAN iyo ururada Xisbullah iyo Xamaas.
Warkan beenta ah ee lagu baahiyey Websiteka iyo Telefishinka Warbaahinta Qaranka ee Qatar ayey dowlada Qatar beenisay isla markaana ku tilmaamtay in kooxo (Hackers) ah weerar kusoo qaadeen warbaahintooda.
Balse dowlada Sacuudiga, Imaaraatiga, Masar iyo Baxreyn oo ay horey xurguf uga dhaxeysay Qatar ayaa durbaba qaaday tilaabooyin adag oo ay xidhiidhka ugu jareen Qatar, isla markaana xayiraad dhanka hawada, xaduuda iyo badda ah saaray dalkaasi yar ee Qatar oo noloshooda ku xidhantahay ganacsiga dalalka kale ee Khaliijka.
Xiisadan ayaa keentay inay sii kala fogaadaan xulafada Maraykanka uu kulahaa bariga dhexe iyo dalalka Carabta. Waxaa iyaguna ku biiray dalalka Xidhiidhka u gaabiyey Qatar wadanka Jordan (Urdun) iyo Murutania kuwaasi oo iyaguna la saftay Sacuudiga iyo Imaaraatiga.
Madaxweynaha Turkiga Tayyib Erdogan ayaa dhankiisa sheegay inuu kasoo horjeedo xayiraada ay dalalka khaliijka saareen Qatar. Wuxuuna sheegay in uu garab taagan yahay Qatar isla markaana sii xoojin doonaan xidhiidhka ka dhaxeeya Turkey iyo Qatar. “…. Si fiican baan u aqaan Amiirka Qatar iyo madaxdooda maaha dad xidhiidhlaleh argagaxisada, hadii ay taas runtahay anaa ugu horeyn lahaa dadka arrintan ka hadla….” ayuu yidhi Erdogan oo uu sheegay in wax xal ah uusan keeni doonin go’adoonka la geliyey Qatar.
Amiirka Kuwait oo wada dadaal uu ku dhex dhexaadinayo Qatar iyo Sacuudiga ayaa booqasho ku tagay Riyad ayaa dalkiisa dib ugu noqday. Balse weli ma muuqato wax isu soo dhawaansho ah ee Sacuudiga iyo Qatar oo weli mid waliba ku adkeysanaya go’aanadooda.
Dalalka Kuwait iyo Cumaan oo xubno ka ah ururka Khaliijka ee GCC ayaa ka cabsi qaba in xiisadan ay keento inuu gebi ahaan burburo urur gobaleedkaasi GCC.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa isaguna bartiisa Twitterka ku qoray hadalo lagu taageerayo Sacuudiga, isla markaana lagu cambaareenayo dalka Qatar oo uu sheegay inay farta kuwada fiiqeen dalalka jaarka la ah.
Dalalka Djibouti iyo Soomaaliya oo lagu tilmmaami jiray kuwa ay Riyad wax walba uu Yeedhiso ayaa ila hada ka hadal xiisadan mana jirto in ay xulafada sacuudiga Raaci Doonaan iyo in kale iyadoo la og yahay in ay dawlada Soomaaliya dalka Sacuudiga u dirtay tiro wasiiro ah si ula xaajoodaan dhanka djibouti waxay u muuqata xaaladu laba daran mid doono sababto ah Djibouti midna kama maaranto ladan dal ee Saccudiga iyo Qatar.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/Qatar-and-Saoudia.jpg 213 236 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-06-07 12:23:342017-06-07 12:23:34Maxaa ka Jira in Koox Ruush ahi ay ka danbeysay Weerarkii Internetka ee Qatar ee abuuray xiisada Khaliijka?
Sir la Helay:Dalka Qatar oo Lala Damacsan yahay Inqilaab Ama Weerar Milater... Sheekh Bashiir iyo Barnaamijki Ramadania oo uu dhex taal uga dhigay Xiisada...